Xigasho.net LAYAAB: Xarun cusub oo lagu daweyo Khuuradda oo la furay iyo laamanaha is guursanaya oo.. - Xigasho.net
LAYAAB: Xarun cusub oo lagu daweyo Khuuradda oo la furay iyo laamanaha is guursanaya oo..
Khuuradda ayaa ah dhibaato weyn ku abuurta lammaanaha is guursada, iyadoo ah mid argagax ku gelisa marka aanu hore qofku u maqal khuuradda, iyadoo dadka qaarkood u fahmaan inuu qofku sakaraadayo oo uu xannuunsanayo.
Khuuraddu waa mid dad badani dhibsadaan, ayaa Dr. Alexander Virt, oo u dhashay Jarmalka ayaa sameeyey xarun uu ku soo bandhigay qalab uu rajeynayo inuu xallilo dhibaatadda khuuradda. Xaruntan waxa yaalla qalab uu qofka afka kaga xidhayo, kaasi oo badhtamaha sanka gaadhaya isagoon wax dhibaato ah u keenayn. Qalabkan ayaa caawinaya in neefta qofka uga soo baado si fudud oo aan dhibaato ku keenayn.
Dhakhtarka Alxenadar Verit oo 67 jir ah, isla markaana ku takhakhusay xanuunnada hurdada, ayaa soo ururiyay macluumaad badan oo cajiib ah oo ku saabsan khuuradda. Dr. Alexander, wuxuu sheegay in raggu marka ay 50 jir dhaafaan ay yihiin kuwo ka cabanaya khuuradda. Dadka soo booqda xarunta madxafkan ayaa iyagoo ku qanacsan oo aqoon ka bartay ka taga.Xarunta Khuuradda ayaa u furan dadka ka cabanaya xanuunnadan saddex maalmood toddobaad kasta.